Filazantsaran'i Petera - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Evanjelin'i Petera)
Ny Filazantsaran'i Petera na Evanjelin'i Piera dia evanjely apokrifa iray karazana amin'ireo Filazantsara sinoptika izay tokony ho voasoratra taorian'ny fisasahan'ny taonjato faha-2. Io no hany evanjely mitantara amin'ny antsipiriany kokoa ny nivoahan'i Jesosy avy tao am-pasana tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty. Tao Akhimîm ao Ejipta no nahitana ny ampahany amin'io evanjely io. Ahitana fitantarana izay anaovan'i Petera "izaho" ny tenany io ampahan-dahatsoratra io. Miresaka momba ny fitsarana an'i Jesosy sy ny fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty izy.
Voatsindry mafy ao amin'io filazantsara io ny helok'i Heroda (izay voalaza ao amin'io evenjely io fa mpanjaka) sy ny an'ny Jiosy miohatra amin'ny an'i Pilato sy ny Romana: ilay ampahan-dahatsoratra dia manomboka amin'ny fandavan'i Heroda sy ny Jiosy hanasa tanana tahaka an'i Pilato, alohan'ny hanameloka an'i Jesosy. Taorian'ny fiaingan'i Pilato dia namoaka didim-pitsarana koa i Heroda. Taorian'ny fanomboana an'i Jesosy miaraka amin'ireo jiolahy roa, ny vatan'i Jesosy dia napetraka tao amin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatea izay voahidy tateraka sady nambenana miaramila romana araka ny fangatahan'ny manam-pahefana jiosy, fa ny mpianatr'i Jesosy izay noroahina kosa dia namitsaka. Vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy ho velona ireo miaramila. I Jesosy dia nentina zava-mananaina miendrika anjely goavambe nefa nihoaran'ilay nitsangan-ko velona izy ireo. Nihazakazaka ireo miaramila mpiambina hampandre an'i Pilato, ny zava-mananaina fahatelo kosa dia nanambara ny fitsanganan-ko velon'i Jesosy tamin'i Maria Magdalena sy tamin'ireo namany tonga hamangy ny fasana.
Ny lahatsoratra dia mifarana amin'ny fankalazana ny andro firavoravoan'ny mofo tsy misy masirasira miaraka amin'ny mpianatr'i Petera sy i Andrea ary i Levy izay ndeha hanjono any Galilea. Izany dia hita ao amin'ny fizaràna izay angamba anomanana ny fitantarana ny fisehoan'i Jesosy voalohany teo amin'izany toerana izany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Filazantsaran%27i_Petera&oldid=980714"
Dernière modification le 5 Martsa 2020, à 17:27
Voaova farany tamin'ny 5 Martsa 2020 amin'ny 17:27 ity pejy ity.